मेरुदण्डको समस्याले पिडित मनबहादुरलाई सहयोग जुटाउन न्यूयोर्कमा फिल्म प्रर्दशन गरिने
उपचार खर्चको अभावमा छटपटाइरहेका हिलेटक्सारका मनवबहादुर गुरुङलाई सहयोग जुटाउन अमेरिकामा फिल्म प्रर्दशन गरिने भएको छ ।
दोर्दी गाँउपालिका वडा नंंं. ४ हिलेटक्सारका ३४ वर्षिय मनवहादुर विगत ३ वर्ष देखि मेरुदण्डको समस्याबाट पिडित छन् । उनको उपचारका लागि सहयोग जुटाउन क्होलासाँेथर गाँउपालीका वडा नं. १ नजेरेका गमप्रसाद गुरुडको पहलमा सुवास गुरुङद्धारा निर्देशित कुटुम्वरी साइनो फिल्म प्रर्दशन गर्न लागिएको हो । फिल्मको प्रर्दशन अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित गुल्सन ट्यारेसमा अगस्ट ५ अर्थात् यहि साउन २१ गते हुने भएको छ ।
ह्यीलचेयरको साहार लिदै सहयोगको खोजीमा रहेका मनवहादुरले सहयोगका लागि अपिल गरेको सामाचार असारको अन्तिम साता रेडियो मसर््याङदीबाट प्रसारण भएको थियो । सोहि समाचार सुनेर र रेडियो मस्र्याङदीको वेभसाइटमा देखेपछि केही मात्रामा भएपनि मनवहादुरको उपाचारका लागि सहयोग जुटाउन फिल्म प्रर्दशन गर्ने योजना बनाएको नजेरका गमप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो । फिल्मको टिकट विक्रिबाट उठेको रकम प्रर्दशनका क्रममा लागेको खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकम पिडितलाई प्रदान गर्ने पनि गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले न्यूयोर्कस्थित सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई सहयोगका लागि सहभागिता जनाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
गाँउघरमा सामान्य विजुलीको काम गरी जिविकोपार्जन गर्दै आएका मनवहादुरको विद्युत् लाइन जोड्ने क्रममा पोलबाट खसेर ढाँड भाँचिएको थियो । ३ वर्ष अघि साउन महिनामा भएको उक्त दुर्घटनाले उनको जिवन अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ । उनको उपचारका लागि हाल सम्म मात्र १७ लाख भन्दा वढि खर्च भैसकेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । अहिले उनको कम्मर मुनीको भाग नचल्ने भएको छ ।
घरको अर्थिक अवस्था पनि कमजोर र आयआर्जनको कुनै स्रोत नभएपछि मनवहादुरले स्वास्थ्य उपचारका लागि देश विदेशमा रहेका व्यक्ति तथा समाजिक संघसस्थासगँ सहयोगको याचना गरेका छन् । मनवहादुरको श्रीमती २ छोरा र १ छोरी छन् ।